I-Huawei Watch GT 2: I-smartwatch entsha sha isemthethweni | Izindaba zamagajethi
Ngaphezu kweM Mate 30 entsha, IHuawei isishiye izolo nezindaba eziningi emcimbini wayo wokwethula. Umkhiqizo waseChina nawo wethule ngokusemthethweni i-smartwatch sayo esisha. Imayelana ne-Huawei Watch GT 2, okuyisizukulwane sesibili sale modeli, ngemuva kwemiphumela emihle ngonyaka owedlule kusuka kwesokuqala. Ukuthengiswa kwayo kudlula izigidi eziyishumi, njengoba inkampani isho izolo.
Leli washi elisha belivuza ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Ngakho-ke ukwakheka kwayo bekuvele kuyinto eyaziwayo kithina, kepha manje sekusemthethweni. IHuawei Watch GT 2 yethulwa njengewashi lentshisekelo enkulu, enemininingwane emihle, ngaphezu kokufika ngokuthuthuka okuthile emisebenzini yalo.
Umklamo wokubuka uputshukile kuleli sonto. Ikhethe umklamo omuhle, onethezekile, kepha ophikisana ngokuphelele lapho wenza ezemidlalo. Sithola i-chassis yensimbi ezacile impela, futhi eyenza ibe newashi elilula kakhulu. Esikrinini, kusetshenziswe ingilazi eyindilinga ye-3D enemiphetho egobile, enikezela ukusetshenziswa okunethezeka.
Ngaphezu kwalokho, le Huawei Watch GT 2 ifika namafreyimu aqukethe impela. Ngakwesokudla kwewashi kunezinkinobho ezimbili, elingisa imiqhele yewashi elijwayelekile. Zisebenziseka kalula futhi zizosivumela ukuthi sijikeleze i-interface noma sifinyelele eminye imisebenzi elindile.
1 Imininingwane ye-Huawei Watch GT 2
3 Intengo nokwethulwa
Imininingwane ye-Huawei Watch GT 2
Iwashi lethulwa ngosayizi ababili emakethe, elinye linokudayela okungamamilimitha angama-46 kanti elinye linokudayela okungamamilimitha angama-42. Yize sinedatha yemodeli enkulu kunazo zonke kuleli cala, i-46mm. Le Huawei Watch GT 2 ifika ne- usayizi wesikrini esingu-1,39-intshi. Isikrini esenziwe ngephaneli le-AMOLED futhi isinqumo saso singamaphikseli angama-454 x 454.
Ngaphakathi kwewashi kukhona i-chip ye-Kirin A1. Yiprosesa entsha yomkhiqizi yamadivayisi afana nokugqoka. Eqinisweni, besivele sikubonile ku-FreeBuds 3 eyethulwe ku-IFA kule nyanga. Iprosesa ifaka iyunithi yokucubungula ye-Bluetooth ethuthukile, enye iyunithi yokucubungula umsindo, futhi ivelele ngaphezu kwakho konke ukusetshenziswa kwayo kwamandla aphansi. Ngale ndlela, iwashi lizosinika ukuzimela okukhulu.
Eqinisweni, njengoba iHuawei iveze esethulweni sayo, Le Huawei Watch GT 2 izosinika amandla okuzimela angafika emasontweni amabili. Yize kuzoncika ngokwengxenye ekusetshenzisweni esikwenzayo nemisebenzi yayo. Uma sifuna ukusebenzisa isilinganiso se-GPS ngokuqhubekayo, sizosinika amahora angama-30 wokusetshenziswa, kumodeli engu-46 mm, namahora ayi-15 kolunye. Ngakho-ke kuzoncika kumsebenzisi ngamunye nemisebenzi abayisebenzisayo.
Amandla wokugcina ewashini nawo anwetshiwe. Kusukela manje, le Huawei Watch GT 2 isinikeza isikhala sokugcina izingoma ezingafika ku-500 ngaphandle kwenkinga. Ngale ndlela, siyohlala sinezingoma esizithandayo.
IHuawei Watch GT 2 iwashi lezemidlalo, ngakho-ke sinazo zonke izinhlobo zemisebenzi yezemidlalo. Inekhono lokubona nokulinganisa imidlalo ehlukene eyi-15, kokubili ngaphakathi nangaphandle. Imidlalo esiyithola kuyo yilena: ukugijima, ukuhamba, ukugibela intaba, ukugibela amabhayisikili, ukubhukuda emanzini avulekile, i-triathlon, ukuhamba ngebhayisikili, ukubhukuda echibini, ukuqeqeshwa kwamahhala, umshini we-elliptical nowokugwedla.
Enye yezinzuzo ezinhle zayo ukuthi sizokwazi ukuyisebenzisa ukubhukuda, kuzo zonke izinhlobo zamanzi. Iwashi liyi-IP68 eqinisekisiwe, okwenza ingangeni manzi. Lesi sitifiketi senza sikwazi ukusifaka sifike kumamitha angama-50, njengoba kungabonakala ekwethulweni kwaso, okwenza kube lula ukusisebenzisa ngenkathi senza ezemidlalo. Sizoqhubeka nokukala umsebenzi wethu ngaso sonke isikhathi, njengebanga, isivinini noma ukushaya kwenhliziyo.
Ngakho-ke, ngale Huawei Watch GT 2 singakwazi sibe nokulawula okuqondile komsebenzi wethu ngaso sonke isikhathi. Phakathi kwemisebenzi yayo kukhona isilinganiso sokushaya kwenhliziyo, izinyathelo ezithathiwe, ibanga elihanjiwe, ama-calories ashisiwe, ngaphezu kokulinganisa izinga lokucindezeleka labasebenzisi. Ngaphezu kwemisebenzi yayo yezemidlalo, iwashi lisinika ezinye eziningi. Njengoba singathola izaziso kuwo, samukele izingcingo, silalele umculo ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke sizokwazi ukuwusebenzisa kuzo zonke izinhlobo zezimo ngaphandle kwenkinga.
Esethulweni sayo, inkampani ikuqinisekisile ukuthi le Huawei Watch GT 2 izokuya kwethulwa eSpain naseYurophu kuyo yonke inyanga ka-Okthoba. Okwamanje alukabi bikho usuku oluthile ngo-Okthoba lokwethulwa kwalolu hlelo, kodwa impela kuzoba nezindaba eziningi maqondana nalokhu kungekudala.
Okusemthethweni amanani entengo wezinguqulo ezimbili zewashi. Ngemodeli enobubanzi obungu-42 mm kuzofanele sikhokhe ama-euro angama-229. Uma le esiyifunayo ingu-46 mm owodwa, khona-ke intengo ingama-euro angama-249 kuleli cala. Umkhiqizo ubethula ngemibala ehlukahlukene, ngazo zonke izinhlobo zamabhande ngokungeziwe, ngakho-ke sinokukhetha okuningi kulo mkhakha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » I-Huawei Watch GT 2: I-smartwatch esisha somkhiqizo sisemthethweni
IHuawei Mate 30 ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza zeGoogle: Konke odinga ukukwazi